Warshadda Qalin -qubka Shiinaha iyo soosaarayaasha | SJJ
Qalabaynta qalinku waa aalad si dhakhso leh oo hufan u gudan karta hawlaheeda. Qaab noocee ah caarada qalinka ee aad u baahan tahay, afaystaha ayaa kaa caawin doona inaad gaarto. Farsameeyaha qalinku waa badeecad lagama maarmaan u ah carruurta, fiiqe caag ah oo leh biro.
Qalabaynta qalinku waa aalad si dhakhso leh oo hufan u gudan karta hawlaheeda. Qaab noocee ah caarada qalinka ee aad u baahan tahay, afaystaha ayaa kaa caawin doona inaad gaarto. Farsameeyaha qalinku waa badeecad lagama maarmaan u ah carruurta, fiiqe caag ah oo leh biro. Iyada oo leh kala -duwayaasha qalin -qori oo kala duwan oo aad kala dooran karto, way fududahay in la helo ikhtiyaar ku habboon baahiyahaaga, hadiyad weyn oo dib loogu noqdo xilligii dugsiga.
Qalabaynta qalinka oo leh midabyo isku dhafan oo caado ah ayaa dabooli kara baahiyahaaga waqti dheer / waqti kasta.
Muuqaalka kartoonka oo qurux badan, carruurtu waxay yeelan doonaan xiise iyo jecel badan
Bacaha bay'ada u fiican iyo kaararka birta ah ee nabdoon ayaa kuu oggolaanaya inaad qalinka u rogto si habsami leh.
Ku habboon cabbirka; si sahal ah ayaa loo gelin karaa qalin qalin, jeeb ama gacanta, habayn cabirkaaga loo baahan yahay.
Ku fiican dadka waaweyn iyo carruurta inay ku isticmaalaan dugsiyada, xafiisyada, guryaha, mashaariicda farshaxanka, iwm.
Hore: Buugga Xusuus -qorka & Qoraallada Dhegdheg
Xiga: Khaanadaha Qalinka & Kiisaska Qalinka